UNkz Tshegofatso Molefe.
Ukuhlolwa akukhona kuphela okubangela umfundi owenza izifundo zonyaka wokugcina uNkz Tshegofatso Molefe ukuthi abe nexhala phela ubambe iqhaza emncintiswaneni i-Justice Pageant SA ezobanjelwa eGoli ngasekupheleni kwenyanga.
Lo mfundi oneminyaka engama-22 ohlala eMgungundlovu uyena kuphela kwabakowamanqamu ongowaKwaZulu-Natal.
Lo mncintiswano uhlose ukuthuthukisa ubuqotho ezikoleni nasemiphakathini yaseNingizimu Afrika ngokukhetha izikole eziyisibonelo esihle ngokobuqotho ukuze zigqugquzele ezinye ukuba zilandele ezinyathelweni zazo.
‘Ngingenele lo mncintiswano ngoba ugxile ezintweni eziyizimisompilo engikholelwa kuzo futhi engizisebenzisayo empilweni yami. Sengifunde nokuthi uma ungumholi akusho ukuthi ungumholi oqotho okungumuntu ongasabi ukulwela iqiniso. Ngisakhula nganginesifiso sokwenza okufanele futhi ngikhunjulwe njengomuntu olusizo ebantwini, yilapho ke iphupho lokufunda ezoMthetho laqala khona. Okunye okungihlaba umxhwele yindlela uhlelo lwezobulungiswa olusebenza ngayo,’ kusho uMolefe.
Umncintiswano udinga ukuthi abakowamanqamu benze imisebenzi ehlukene ezikoleni zaseNingizimu Afrika lapho bevakashela khona isikole esisodwa ngesonto kusukela ekuqaleni konyaka befundisa ngokugqugquzelwa yi-No Crime Culture Project. Lo msebenzi ufundisa abantu ngesidingo sobuqotho, inqubonhle nendlela yokuziphatha.
‘Sengisungule umsebenzi obizwa nge-Rising Generations onakekela izingane emakhaya aphethwe yizingane lapho sibonelela ngokokwenhlanzeko nezingubo zokugqoka. Inhloso yami ukulekelela la mantombazane ukuthi athole ithuba lokuphumelela esikoleni ngenxa yokuhlala ekhaya elisekela ukufunda kwawo. Usuku lokumemezelwa kwabanqobile lungomhla zingama-29 kuLwezi. Ngike ngaba matasa ngokuhlolwa ezifundweni zami ngakho ngisazoqala ngiqokelele ngilungise ibuyambiko kubaholi bami abaqotho kanye nabasakhula mayelana nomthelela wezifundo zami kubona,’ kusho uMolefe.
Yize noma ukunqoba umncintiswano kungaba kuhle kakhulu kodwa uMolefe ukholelwa ekutheni ukusebenzisa lelithuba ukuze enze umehluko ezimpilweni zamantombazane asakhula kubaluleke ukudlula noma yisiphi isicoco.
‘Ukunqoba kunga kuhle kakhulu kodwa sengenze umehluko ezimpilweni zabantu noma ngabe ngiyaphumelela noma cha. Kade nganginentshisekelo yokusiza abantu nokusebenza nabo futhi uma konke kuhamba kahle ngezifundo zami, ngizokwethweswa iziqu ngonyaka ozayo futhi ngifuna nokuqhubeka nezifundo zami ngenze iziqu ze-LLM ezifundweni zezabasebenzi. Ngiyafisa futhi nokusebenza njengevolontiya ejele ngisebenza ngaphansi kwezinhlelo ezibhekelele omama ababelethela ejele nokungenela umncintiswano wokukhethwa kuka-Miss South Africa ngonyaka wezi-2019,’ usho kanje.
UMolefe waqokwa njengoMgcinimafa wokuqala wesifazane wenhlangano yabafundi i-Black Lawyers Association Student Chapter ngonyaka wezi-2017.
Amagama: nguThandiwe Jumo